F.J.K.M. Antsampandrano Mananara - Fiangonana
F.J.K.M. Antsampandrano Mananara
Fiangonana nateraky ny asa misiona avy amin’ny LMS (London Missionary Society) ary isan’ireo zokiny indrindra aty amin’ny faritra Isoavina ny FJKM Antsampandrano Mananara. Niorina ny taona 1863 ary niaina sy namakivaky ny vanim-potoana nifandimby teo ambany fahasoavan’Andriamanitra.
Iray amin’ireo Fiangonana 18 mandrafitra ny SOBA MANANARA, faritra Isoavina, ao anatin’ny synodamparitany Antananarivo Atsinanana izy. Ka kilasy Faha-dimy no misy azy ao amin’ny Sinodamparitany.
Toerana tsy mba talaky maso i Antsampandrano Mananara nefa kosa be mpahafantatra na dia 60 km miala ny renivohitr’i Madagasikara aza no misy azy. Tsy tonga ho azy anefa izany fa noho ireo taranaka avy ao sy ny tantara. Azo lazaina mantsy fa avy tao no niaingan’ny tarapahazavan’ny Tompo sy ny Filazantsara ka niparitaka tamin’ireo faritra manodidina ; (Manazary, Mangatokana, Mahatsinjosoa…).
Ho Fiangonana mamiratra amin’ny finoana toy ny Fiangonana FJKM rehetra izy. Tsy amin’izany fotsiny anefa fa amin’ny TANTARA ihany koa. Miezaka hahatanteraka izany ny taranaka rehetra araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina.
Samy tonga ao avokoa raha mihazo ny RN2 (Arabe mankany Toamasina) ka mitsofoka eo Maharidaza mankaty Anjepy sy Andriampamaky.
Na avy amin’ny RN3 (Arabe mankany Anjozorobe) ka mivily eo Andriampamaky mihazo ny lalan-tany ho any Maharidaza. Rehefa tonga eo amin’ny tetezan’i Marofarihy dia mivily ho any Inanjakana dia mahita an’Antsampandrano ianao afaka 5 km eo ho eo.
Misy lalana hafa koa anefa avy eo ambanin’ny Fiakarana ho any Ambohitseheno ary mandalo an’i Tsifenokova sy Ambatofotsikely ka tonga ao Antsampandrano koa.
Ireo Vaovao farany
SAKAFOM-PIRAHALAHIANA 29 jolay 2017
Ireo tanàna manodidina
Andrefana : Ambatomena Mananara
Atsimo : Inanjakana, Isoavinandriana
Atsinanana : Ambohitantara, Manazary ary ny Kaominina Ranovao
Avaratra : Ambohitseheno
Mpitandrina: 0320419192 / 0330745848
Filohan’ny Zanaka Ampielezana : 034 05 621 31 / 0338752528
© 2016 F.J.K.M. Antsampandrano Mananara